Factory Tour - Ruizheng Teknolojia Co., Ltd.
Vondrona manan-karena indrindra dia avo-teknolojia orinasa tsy miankina anjara amin'ny sakafo additive, manome ny fitaovana sy ny sakafo ho an'ny sakafo, sakafo, ary ny tarehy orinasa rehetra amin'izao tontolo izao.
Manan-karena indrindra Group dia tsara vita ny stratejika fandaharana amin'ny alalan'ny fametrahana ny fototra famokarana sy ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny-foibe any Shandong Province, ny R & D foibe ao Shanghai City.
Any in Shandong, ny famokarana fototra mandrakotra 2000 metatra tora-droa, izay tanteraka amin'ny fitaovana lehibe fitaovana salantsalany. Ny toetra-maka andraikitra foibe fanaraha-maso ho an'ny fanaraha-maso ny dingana rehetra ao amin'ny dingana famokarana avy amin'ny akora, fitsaboana, famonosana ny vokatra vita sy Ankehitriny-varotra amin'izao fanompoana sy miantoka ny fomba ny vokatra orinasa mitsangana eo am-lohalaharana ny amin'io sehatra io. Ny varotra ekipa no mandrafitra ny matihanina, tsara ofana sy fakan-tahaka toa avo nahazo diplaoma avy amin'ny oniversite, izay manolotra ny tsara indrindra mpanjifa ny vokatra tsara sy Ankehitriny-varotra fanompoana.
Ny tena vokatra javatra dia avy amin'ny Miaro, Sweeteners, Solon-tsirony, proteinina, Acidulants, vitamina, Mahasalama, ny siligaoma fitoeran-tavin-Sakafo fortifier sy ny sisa.
Mino izahay fa ireo dia afaka hihaona ny fitakian'ny na ny an-toerana sy iraisam-pirenena orinasa sakafo sy handray ny tanana aminy rehetra ny mpanjifa.
Mampanantena isika mba "hanao mpanjifa afa-po, ho sambatra mpiasa", ary manantena izahay fa hanorina tsara ny fiaraha-miasa amin'ny namana avy amin'ny anisan'izao tontolo izao mba hampandrosoana ny mpiara fampandrosoana.